Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Ndị ọchịchị Hong Kong wepụrụ Royal Caribbean 'ụgbọ mmiri na-enweghị ebe ọ bụla'
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ahụike • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị ọchịchị Hong Kong wepụrụ ụgbọ mmiri Royal Caribbean na-enweghị ebe ọ bụla.
'Thegbọ mmiri na-enweghị ebe ọ bụla' kwere ka ndị njem gbara ọgwụ mgbochi zuru oke bụ ndị nwalere ihe ọjọọ maka nje ahụ awa 48 tupu njem ahụ.
Ezubere ụgbọ mmiri ahụ ka ọ malite njem ụgbọ mmiri na-agaghị aga ebe ọ bụla, machibidoro ọkara ikike.
A na-enyo enyo otu onye ọrụ ụgbọ mmiri nwere ọrịa coronavirus ka emechara nyocha oge niile.
E kwere ka ndị njem si n’ụgbọ ahụ pụọ n’ihi na ha na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ na-akpakọrịtaghị kpọmkwem.
Royal Caribbean A machibidoro Spectrum nke ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ịpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri Hong Kong n'abalị a, n'ihi na a na-enyo ndị ọrụ ụgbọ mmiri nwere ọrịa coronavirus mgbe nyochachara oge niile.
Dị ka ndị ọrụ ụgbọ mmiri si kwuo, ụgbọ mmiri ahụ ga-amalite njem "ụgbọ mmiri na-agaghị ebe ọ bụla" na mmiri dị nso, na-ejedebe na ọkara ikike yana naanị maka ndị bi na-agba ọgwụ mgbochi zuru oke bụ ndị nwalere ihe ọjọọ maka nje ahụ awa 48 tupu njem ahụ.
Na nkwupụta na Facebook, Royal Caribbean kwuru, sị:
“N'ime ule COVID-19 a na-eme kwa ụbọchị na ndị ọrụ ụgbọ mmiri taa, anyị chọpụtara otu onye ọrụ ụgbọ mmiri nwalere na-agaghị ama ama. Na-eso ule nlele nke abụọ, nnwale ahụ rụpụtara ihe dị mma maka COVID-19. ”
Ihe dị ka ndị njem 1,000 n'ime ngụkọta nke 1,200 abanyelarị ụgbọ mmiri mgbe ndị isi obodo Hong Kong nyere iwu kagbuo njem abalị anọ ahụ.
Ndị niile nọ n'ụgbọ mmiri kwesịrị ịnwale ule ma ha hapụ ụgbọ mmiri ahụ n'ihi na ha na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ enweghị kọntaktị ozugbo.